अमेजन अपील पत्र, विक्रेता खाता निलम्बित, कार्य योजना
तपाईंको अमेजन अपील परामर्शदाता
कसरी एक सफल अमेजन अपील पत्र र कार्य को योजना लेख्न?
हामीसँग अहिले नै लाइभ कुराकानी सुरु गर्नुहोस् वा तल विवरणहरू तल अनलाइन जाँच फाराम पूरा गर्नुहोस् र त्यसपछि हाम्रो परामर्शदाता एक घण्टामा फिर्ता आउनेछ। हामीलाई एउटा उत्तम अमेजन सस्पेंशन अपील पत्रको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाम्रो सेवाहरू हेर्नुहोस्
बुझ्नुहोस् किन अमेजन विक्रेता खाता निलम्बित गरिएको छ!
खाता निलम्बनको कारण थाहा पाउनु खाता फेरि सुरु हुने दिशामा पहिलो कदम हो। समस्या पत्ता लगाउन फिल्डको विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक छ। हाम्रो विक्रेता खाता विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई तपाईंको निलम्बनको मूल कारण पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ र हामी तपाईंलाई कसरी एउटा उत्तम लेख्न मद्दत गर्न सक्छ भनेर वर्णन गर्दछ। अमेजन अपील पत्र। अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईंको अपील ASAP पाउनुहोस्।
हामी दिनको २ 24 घण्टा खुल्ला छौं, हप्ताको Open दिन।
नि: शुल्क परामर्श बुक गर्नुहोस्
परामर्शदाता १ घण्टामा फर्किनेछ
म कसरी यो निलम्बन भविष्य मा हुन बाट रोक्न सक्छु?
तपाइँ यसको बारे मा सावधानीपूर्वक सोच्नु पर्छ कि तपाइँ कसरी भविष्य मा फेरि यो हुन बाट रोक्न सक्नुहुन्छ। अमेजनले अपेक्षा गर्दछ कि तपाइँ कुनै पनि कार्य योजनाहरु लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र कहिलेकाहिँ उनीहरु तपाइँको अमेजन विक्रेता खाता लाई पुनर्स्थापित गर्दछ एक पटक तपाइँ प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको गतिविधि योजना गर्नुभयो।
यदि तपाइँ तपाइँको अमेजन विक्रेता खाता को अपील मा सहायता को जरूरत छ, वा अर्को हात मा यदि तपाइँ देख्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँको बहाली को बाधाहरु के हो, हामी मद्दत गर्न सक्छौं। हाम्रो एक प्रतिनिधि संग कुरा गर्नुहोस् एक नि: शुल्क परामर्श र तपाइँको मामला को बारे मा विशेषज्ञ राय सुन्न।
यदि तपाइँ तपाइँको लिस्टिंग निष्क्रिय छ र नीति उल्ल of्घन को लागी तपाइँको खाता को स्वास्थ्य लाई प्रभावित गर्न सक्छ भने हामी अपील गर्न मा पनि मद्दत गर्न सक्छौं! एक नि: शुल्क परामर्श प्राप्त गर्न को लागी हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरु संग च्याट गर्नुहोस्।
तपाइँको निलम्बित अमेजन खाता २४ घण्टा भित्र पुनर्स्थापित पाउनुहोस्
यो तपाइँको अमेजन विक्रेता खाता निलम्बन गर्न केहि समय लिने बित्तिकै, खाता पुनर्स्थापित गर्नु समय खपत प्रक्रिया हुन सक्छ। कहिलेकाँही, यस समय केही गल्तीहरूको कारणले त्यहाँ विस्तार भइन्छ र त्यहाँ विक्रेताको कारणले गर्दा विभिन्न कारणहरू जस्तै अमेजनको नीतिहरूमा स्पष्टता नहुनु, पछाडि मुद्दा पत्ता लगाउन सक्षम हुनु हुँदैन। अमेजन खाता निलम्बन, वा स्पष्ट कट र पेशेवर अमेजन निलम्बन अपील पत्र लेख्न असमर्थ। हामी यी समस्याहरू सबै भन्दा राम्रोसँग बुझ्दछौं र त्यसैले हामी सब भन्दा छिटो समयमा गुणस्तरीय सेवाको ग्यारेन्टी गर्दछौं।
अप्लस ग्लोबल ईकॉमर्स तपाईंको पुनरावेदन आवश्यकताहरू र अधिकको पूर्ण-समाधानको लागि एक स्टप समाधान हो। समय २ 24 घण्टा देखि hours२ घण्टा समस्याको जटिलताको आधारमा हुन सक्छ।
म कसरी मेरो अमेजन खाता को निलम्बन गर्न सक्छु?
कसैलाई काममा लिनु उत्तम हो तर तपाई अमेजनले पठाएको सूचनामा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ र कार्य योजनाको साथ आउनुहुनेछ। यी सभ्य अपीलको मूल तत्त्वहरू हुन्।
निलम्बन अपील पत्र लेख्न कति समय लाग्छ?
अपील लेख्नको लागि छोटो समय यो २ hours घण्टा हो। यो अवधि एक निश्चित निलम्बन अमेजन खाताको विवरण र विक्रेता द्वारा अनुरोध गरिएको सेवाको प्रकारको बमोजिम business-। व्यापार दिनसम्म बढ्न सक्छ।
तपाइँ मेरो अमेजन विक्रेता खाता पुनर्स्थापित गर्न के गर्न सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ धेरै सेवाहरू र प्याकेजहरू छन् जुन हामी एक अमेजन विक्रेता खाता पुनर्स्थापित गर्न प्रदान गर्दछौं। हामी परामर्श, एमेजोन अपील पत्र सबमिशन र सेवाहरूको फलोअप प्रदान गर्दछौं; तपाईंले चयन गर्नुभएको प्याकेजको प्रकारमा निर्भर गर्दै।
के तपाईंले अमेजन विक्रेता निलम्बन केसहरूमा काम गरिसक्नुभयो?
हो, हामीले सम्बन्धित विभिन्न केसहरूको अधिकताका साथ काम गरेका छौं अमेजन खाता निलम्बन। साथै, हामीसँग यस क्षेत्रका दिग्गजहरूको टोली छ।
यदि अमेजनले अधिक जानकारी अनुरोध गरेमा के हुन्छ?
हामी पुनरावेदन गर्दछ जब सम्म यो आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको छ सम्म हामी अपील ह्यान्डल गर्छौं। तपाईलाई एकचोटि चार्ज गरे पछि, हामी सबै समस्याहरूको समाधान नभएसम्म प्रक्रियाको प्रत्येक सानो चरणमा काम गर्दछौं।
के खाताको पुनर्स्थापना ग्यारेन्टी गरिएको छ?
हामी एक पार्टनरको रूपमा, निलम्बित अमेजन विक्रेता खाता पुनर्स्थापित गर्न सबै भन्दा राम्रो विश्लेषण र अपील गर्दछौं। हामी तथापि, अमेजनको अन्त्यबाट कारकहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं र खाताको पुनर्स्थापना १००% ग्यारेन्टी छैन। यद्यपि हामीले अहिलेसम्म 100%% भन्दा बढीको सफलता दर कायम राखेका छौं।
के हामी एक पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्छौं?
हामी आदर्श रूपमा पैसा फिर्ता मनोरन्जन गर्दैनौं तर त्यहाँ उपन्यास सर्तहरू हुन सक्छन् जहाँ हामी त्यसलाई विचार गर्छौं। थप जानकारीको लागि हाम्रो फिर्ती नीतिहरू पढ्नुहोस्।
अमेजन अपील सेवा को लागी तपाइँको सफलता दर के हो?
धन्यबाद, अब सम्म हामी एक सफलता दर उच्च वा 98%% बराबर बनाए। हामी उत्कृष्ट गर्दैछौं र ग्राहक सन्तुष्टिका कारण 90 ०% ग्राहक रिटेन्सन रेट पनि छ।
अप्लस ग्लोबल अमेजन अपील पत्र
01: 11 13 जुन 21
मेरो अमेजन विक्रेता खाता निस्क्रिय पारिएको थियो, त्यसैले मैले एक प्लस ग्लोबल अमेजनलाई सम्पर्क गरे मलाई निष्क्रियताको अपील गर्न कार्य योजना लेख्न मद्दत गर्न। उनीहरूले मेरो लागि लेखेका अपील पूर्ण, लामो थियो।... मेरो खातामा निजीकृत गरियो र मैले आफ्नो अक्षमता भन्दा पहिले अनुभव गरिरहेको विशिष्ट मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरें। कुलमा, एक उत्कृष्ट अनुभव, तिनीहरू उत्तरदायी थिए र मलाई मेरो खाता पुन: सक्रिय गर्न प्रक्रियामा हिंडे। म भर्खर दुई दिन अगाडि सक्रिय भयो! त्यसैले उनीहरूका सेवाहरू निश्चित रूपमा काम गर्दछन्!थप पढ्नुहोस्
01: 00 13 जुन 21
मेरो आफ्नै अपीलको साथ आएर, म -4- P POA पठाउँछु र भाग्य छैन। म शाब्दिक नयाँ अमेजन खाता बनाउने बारेमा सोचिरहेको थिएँ किनभने मैले मेरो खाता फिर्ता प्राप्त गर्न सकेन। तपाईं सम्झनुहोस्, म अझै अझै रकम लक छ... अमेजनको साथ र उनीहरूले मेरो कुनै अपीलको जवाफ दिदैनन्। ("हामी यस मुद्दाको बारेमा थप ईमेललाई जवाफ दिन सक्दैनौं" भन्ने ईमेलको साथ)। पछि, यस कम्पनीको प्रयोग गर्ने कसैबाट सिफारिस लिदै मैले उनीहरूसँग जाने निर्णय गरें। मैले जोखिम लिएँ र भनें कि यो कि त म तिनीहरुलाई तिर्न दिन्छु र मेरो खाता फिर्ता ल्याउँछु र चलिरहेको हुन्छ र मेरो कोष फिर्ता पनि हुन्छ वा मैले भुक्तानी गर्दछु र पैसा गुमाउँछु र मेरो खाता पनि रकमबाट गुमाउँछु। २ महिना पछि निलम्बित भएपछि मैले यो भुक्तान गरें। मलाई मेरो खाता फिर्ता पाउन मद्दत गर्न कम्पनी। तिनीहरूले शाब्दिक रूपमा एक POA बुझाउछ र अर्को दिन मैले "तपाइँको अमेजन खाता अब पुन: सक्रिय भयो" भन्ने एक ईमेल प्राप्त भयो। एउटा काम राम्रो गरीयो र म निश्चित रूपमा अप्लस ग्लोबललाई सिफारिश गर्दछु यदि तपाइँ तपाइँको खाता पुनर्स्थापित वा पुनःसक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने, उही गल्ती नगर्नुहोस् I गर्नुभयो। तपाइँको लागि एक POA लेख्न एक पेशेवर प्राप्त गर्नुहोस्।थप पढ्नुहोस्
09: 27 29 मे 21
तिनीहरू के गर्छन् राम्रो छ। मैले तिनीहरूलाई मेरो अमेजन विक्रेता खाता पुन: सक्रिय गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरें, र यसले केहि समय लिए, तर तिनीहरू कहिले खातामा हार मान्दैनन्। म नहुन्जेल उनीहरूले मेरो लागि अपीलहरू लेखे... पुनः सक्रिय भयो। मेरो पुन: सक्रियणमा करीव २ र आधा महिना लाग्यो, तर मसँग एक साथी छ जुन यो सेवा प्रयोग गर्‍यो र मात्र दुई दिनमै उसको खाता फिर्ता भयो। अत्यधिक सिफारिश!थप पढ्नुहोस्
08: 26 05 मे 21
म तिनीहरूसँग काम गर्न पाउँदा खुसी छु। धेरै छिटो सेवा र तिनीहरूको अपील पत्र आश्चर्यजनक छ। यी केटाहरूलाई थाहा छ अमेजन के चाहान्छ। धन्यवाद!!
मेरी ग्रेस लैन्डिंगिन
11: 07 03 मे 21
मैले यस कम्पनीमा १०० भन्दा बढी खाताहरूसँग काम गरें र तिनीहरू मध्ये धेरैजसोलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तिनीहरू छोटो मा प्रदान धेरै धेरै राम्रो अपील पत्र सेवा हो। म उनीहरूसँग काम गर्न जारी राख्छु।
06: 17 03 मे 21
नमस्कार! म तिमीलाई भन्न चाहन्छु: मेरो खाता पुन: सक्रिय भयो! तपाईको सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद! म तिमिलाई सम्झने छु।
२:19::24 ० Ap अप्रिल २१
व्यापार मा सर्वश्रेष्ठ तिनीहरूको सेवा भाडामा लिए पछि र मेरो खाताको लागि उनीहरूले के निरीक्षण गरे। मैले भन्नु पर्छ कि म विश्वास गर्छु कि तिनीहरूले केहि समाधान गर्न सक्दैनन्। समस्या भएको जो कोहीलाई पनि सिफारिस गर्नुहोस्... विक्रेता खाता। द्रुत कार्य लिनेहरू र अत्यन्त छिटो परिणामहरू!थप पढ्नुहोस्
२:23::34 ० Ap अप्रिल २१
म यस कम्पनीलाई कुनै पनि अमेजन अपील पत्र लेख्न सिफारिस गर्दछ किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि अमेजन के खोज्दैछ। मैले अन्य कम्पनीहरूमा अनुसन्धान गरेँ र यो छनौट गरे किनकी तिनीहरू मसँग कुरा गर्न समय बनाए... मेरो खाता को बारे मा। मैले सोचेँ कि मलाई रकम रिलिज गर्नका लागि मैले + ०+ प्लस दिन पर्खनुपर्नेछ र मेरो खाता राम्रोका लागि निलम्बित गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद अप्लस ग्लोबलले मेरो अपील पत्र छिटो र व्यावसायिक रूपमा लेखेकोमा। म तपाईलाई आफ्नो पेशीलमा पहिलो पटक अपील गर्ने सल्लाह दिन्छु। यस कम्पनीले मलाई मेरो खाता पुन: सक्रिय गर्न मद्दत गर्यो उही दिन मैले तिनीहरूको अपील पत्रमार्फत मेरो खातामा अपील गरें। जुन मेरो केसमा निजीकृत भएको थियो। एक महान काम को लागी धन्यवाद!थप पढ्नुहोस्
१०::05 १ Mar मार्च २१
व्यक्ति @ एप्प्लस ग्लोबल ईकमर्स वास्तवमै महान र सहयोगी छन्। पूर्ण खाता जाँच पाउनुभयो र परिवर्तन गर्न आवश्यक तिनीहरूबाट पर्याप्त अन्तरदृष्टि पनि प्राप्त भयो। र के अनुमान, यो... मेरो बिक्री पनि राम्रो भयोथप पढ्नुहोस्
१०::04 १ Mar मार्च २१
एप्प्लस ग्लोबल ईकॉमर्स अमेजन अपील सेवाको लागि एक उत्तम सेवा प्रदायक हो। मैले मेरो खाता प्रतिबन्धको h२ घण्टा भित्र पुनःस्थापित गरें।
मलाक अब्दुल्ला खान
१०::15 १ Mar मार्च २१
एप्प्लस ग्लोबल ईकॉमर्स २ घण्टामा डेलिभर भयो र एमेजॉन अहिले नै पुनःस्थापित भयो। बिल्कुल सबै भन्दा राम्रो। हरेक पैसाको लायक छ। मेरो सल्लाह भनेको मूल्य ट्यागमा नहेर्नुहोस् यदि तपाईं परिणामहरू चाहनुहुन्छ भने। यो काम मात्र छ... उत्तम कुराकानी छिटो छिटो पछि, मसँग २ घण्टा भित्र कागजात थियो र acoount २2घण्टा भन्दा कममा रिलीज भयो। मैले 24 महिना भन्दा बढीको लागि खाता ब्लक गरेको थियो। म यसलाई सिफारिश गर्दछु।थप पढ्नुहोस्
१:18:११ १० फेब्रुअरी २१
२ account घण्टा भन्दा कममा मेरो खाता पुनर्स्थापित भयो, म उसलाई कसैलाई सिफारिस गर्दछु, व्यक्तिलाई बढि भुक्तान गर्न रोक्छ र हस्तिहाडको साथ हिंड्छु अपील गर्नको लागि उत्तम! धेरै धेरै धन्यवाद